August 2021 – " कञ्चनजंगा News "
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १६ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
No Comments on पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १६ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
घडिको रोचक तथ्य: विज्ञापनमा देखाइने सबै घडीको समय किन १० बजेर १० मिनेट देखाईन्छ ? जान्नैपर्ने कुरा कृपया हेर्नुहोला !!!
No Comments on घडिको रोचक तथ्य: विज्ञापनमा देखाइने सबै घडीको समय किन १० बजेर १० मिनेट देखाईन्छ ? जान्नैपर्ने कुरा कृपया हेर्नुहोला !!!
तपाईंले घडी लगाउनुभएको छ ? अनि टेलिभिजन तथा अनलाइन पत्रपत्रिकामा आउने घडीको विज्ञापन हेर्नु भएको छ ? हेरे पनि ख्याल गर्नुभएको छैन होला । एक पटक ख्याल गर्नुहोस्। विज्ञापन गर्न राखिएका सबै घडीको समय १० बजेर १० मिनेट सेट गरिएको हुन्छ ।
यी घडीका सुइ १० बजेर १० मिनेटमा हुँदा सन्तुलित अवस्थामा देखिन्छन् । मानिसहरु सन्तुलित चिज हेर्न मन पराउँदछन् । आकर्षणकै लागि विज्ञापन गरिने भउकाले घडीको विज्ञापनलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा आकर्षक बनाउन प्रायः १० बजेर १० मिनेट जाने गरी मिलाइने मनोवैज्ञानिकहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै १० बजेर १० मिनेट जाँदा घडीका घण्टा र मिनेट सुईको अवस्थामा हेर्दा मान्छेको अनुहारमा मुस्कुराहट देखाउनका लागि बनाइने आकृति जस्तो बन्दछ । स्माइलीको आकृतिमा घडीलाई प्रस्तुत गर्न पनि यस्तो गरिएको हुनसक्ने धेरैको विश्लेषण छ ।
साथै घडीमा १० बजेर १० मिनेटको समयमा सुईको अवस्थितिले भी आकार बनाउँछ जुन विजय तथा जीतको संकेत पनि हो । १० बजेर १० मिनेटको अवस्थामा घडीका सुईहरुको अवस्थाले घडीको भित्री भागमा कुँदिएका ब्राण्ड नाम, कम्पनीको लोगो जस्ता चिजहरु छेक्दैन त्यसैले पनि विज्ञापनमा घडीमा १० : १० बजाइएको आंकलन गरिन्छ ।
No Comments on २० वर्षपछी सुपरहिट फ्लिम ‘गदर’ को खुल्यो बास्तबिक रहस्य , फिल्मका निर्देशकले खोले फ्लिम हिट हुनुको रहस्य
उनी थप्छन्, ‘यो फिल्म अमिषा पटेलको भाग्यमा लेखिएको थियो । जति नायिकाले यो फिल्ममा अभिनय गर्न अस्विकार गरे अब उनीहरु फिल्म छोडेकोमा अफसोस जताइरहेका छन् । ’ अनिल शर्माले द हिरो लभ स्टोरी अफ अ स्पाई, अपने, अब तुम्हारे हवाले वतन साथीयों जस्ता सुपरहिट फिल्म पनि बनाएका छन् । यस्तै अनिल शर्मा आफ्नो नयाँ फिल्म अपने–२ को तयारीमा जुटेका छन् ।
No Comments on भैँसी बिग्रिने डरले दूध बेच्नै मान्दैनन्
डोटी, १४ भदौ ९रासस० ः सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, महिनावारी अर्थात छाउपडी भएकी महिलालाई दूध, दही खान दिए गाई–भैँसी बिग्रन्छ र दूध दिन छोड्छ भन्ने अन्धविश्वास अझैसम्म यहाँ व्याप्त छ ।
जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२ का किसान अहिले पनि यही अन्धविश्वासमा भैँसीको दूध बजारमा बिक्री गर्न मान्दैनन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “भैँसी पाल्ने किसान दूध बिक्री गर्न मान्दैनन्, यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकले दूध हालेको चिया माग्छन् तर दूध नहुँदा कालो चियामै चित्त बुझाउनुपर्छ ।”
आफ्ना परिवारबाहेक बाहिरबाट आएका पाहुँनालाई समेत दूध नदिने तर दिनै परे मोही पनि मुस्किलले दिने गरेको जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भैँसीको दूध गैर घरपरिवारलाई दिन हुन्न र बिक्री पनि गर्न हुन्न, दिए वा बिक्री गरे भँैसी बिग्रिन्छ भन्ने वर्षौदेखिको अन्धविश्वास अहिले आएर समस्याको विषय बनेको छ ।”
सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको साइन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले दूध बिक्री वितरण गरे भँैसीले दूध दिन नछोड्ने र भैँसी पनि नबिग्रिने भन्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने भएकोे छ ।
बगलेक र झिग्रानामा दूधको निकै आवश्यकता भएकाले हामीले किसानलाई दूध बेच्न प्रोत्साहित गर्न लागेको जानकारी दिँदै संस्थाका अध्यक्ष भक्तराज जोशीले भन्नुभयो, “सबैले दूध बिक्री गरुन भन्ने उद्देश्यले किसानलाई भँैसी नै किनेर दिने तयारी गर्दै अन्धविश्वास अन्त गर्ने पक्षमा छौँ ।”
उक्त संस्थाले झिग्रानाका किसानमा भैँसीलाई गर्भधारण गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले रु ५० हजारमा उन्नत जातका राँगा किनेर वितरण गरेको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२ कुडासैनका भीमबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वडाभर प्रायः सबैका घरमा भैँसी पालिएका छन् तर दूध कसैले बिक्री वितरण गर्दैनन्, कोही बिरामी पर्दा दूध चाहिए अन्यत्र गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।”
यहाँका किसानले दूधबाट घिउ बनाएर बजारमा भने बेच्ने गरेको अर्का स्थानीयवासी श्यमबहादुर विकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घिउ जति पनि पाइन्छ तर भैँसी बिग्रिन्छ भनेर दूध र मोही दिँदैनन्, अन्धविश्वास कायमै रहेका कारण यहाँ दूधको समस्या पर्दै आएकोे छ ।”
जिल्लामा भैँसीपालक प्रर्याप्त भए पनि अधिकांशले दूध नबेच्दा छिमेकी जिल्ला डडेल्धुराबाट मगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पिपल्लास्थित रामजानकी मिष्ठान्न भण्डारका रामबाबु यादवले बताउनुभयो ।
No Comments on कलंकीबाट पक्राउ परेका यी दुई युवती जसले पुरुष देख्ने बित्तिकै यस्तो हर्कत गर्थे
No Comments on ‘सबैसँगको साथ छुट्यो, म एक्लो भएँ’ भन्दै जब रामकुमारीले योगेश घनश्याम र गोकर्णको अगाडी आँशु खसालीन्, सबै नेता धरधरी रोए
No Comments on आफ्नो श्रीमानलाइ अनावश्यक तनाव नदिनु, नेपाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्न
मेरो भनाइमा सहमत हुनेले सेयर गर्नुस। म पनि महिला हु तर श्रीमानलाई बिगार्ने महिलानै हुन्। हामी महिलाहरु ले नै पुरुषलाई भ्र’ष्टाचारी जड्याहा। पर स्त्री गमन ‘बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने’ एस्तो स्वभाव को हुन बाध्य बनाउछौ। आफ्नो श्रीमानलाइ अनावश्यक तनाव ‘अरुको धन सम्पत्ती वा गहना सङ्ग तौलेर’, अनावश्यक केयर बारम्बार निगरानी केरकार, माइती वा साथीहरू आफन्तको सामु हेपेर वा होच्याएर बोल्ने यस्ता काम कहिले नगर्नुहोस्.नेपाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्न ग्यारेन्टी।
सामाजिक सञ्जालमा राखिएका पोस्टहरु गरिएका टिप्पणीहरु देख्दा ताजुब लागेर आउँछ। होइन, हामी नेपाली के भयौं यस्तो, हामीमा कुनै सकारात्मक भाव नै छैन कि जस्तो। यिनै विषयहरु मनमा खेलिरहेका थिए। यो नकारात्मक सोचले भरिएको समाज नै छोडेर कतै एकान्तमा गएर बसुँबसुँजस्तो लाग्ने भइसकेको छ। मनमा भएको खटपट कम हुन्छ कि भनी साँझ पशुपतिको आरती हेर्न जान मन लाग्यो।
अमेरिकालाई कोरोनाले भन्दा आँधीले बनायो त ह सन हस, कहाँ के कति क्ष ति भयो [ विवरणसहित ]
No Comments on अमेरिकालाई कोरोनाले भन्दा आँधीले बनायो त ह सन हस, कहाँ के कति क्ष ति भयो [ विवरणसहित ]
काठमाडौं । कोरोना महामारीसँग ल डि रहेको अमेरिकाको लुइसियाना प्रान्तमा डरलाग्दो प्राकृतिक सं क ट देखा परेको छ ।
बदलीएको मौसमका कारणले त्यहाँको स्थिति बिग्रिएको हो । लुइसियानाको तटमा आँधी ( Hurricane Ida has made landfall USA ) आउनु भन्दा पहिले, २३० किलोमिटर क्षेत्रमा भारी वर्षा र मेघ गर्जनले सो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।
विद्युत प्रणाली अवरुद्ध भएको छ, सञ्चार सुविधाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । अहिलेसम्म, जनावर र चरा ठूलो संख्यामा मारिएका छन् भने दर्जनौं मानिसहरु घाइते भएका छन् ।
एक गम्भीर कोरोना संक्रमणको बीचमा आएको संकटले नयाँ खत्तरा उत्पन्न गरेको छ । मेक्सिकोको खाडीबाट उठेको तूफान बिस्तारै अमेरिकाको लुइसियाना तटतर्फ बढिरहेको छ ।
त्यसकारण, केहि क्षेत्रहरुमा ति व्र हावा चलिरहेको छ । केहि क्षेत्रहरुमा २३० किमीको हा वाको गति रहेको अमेरिकी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
भारी वर्षाको कारण आएको आँ धी ले जनजीवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । आँ धी अझै रोकिएको छैन । आइडा आँ धीले १६ बर्ष पहिले आएको कैटरीना तूफानको याद दिलाइरहेको छ ।
आइडा आँ धीले लुइसियाना र मिसिसिपी प्रान्तहरुमा व्यापक विनाश निम्त्यायो । यो प्रकोप प्रान्तमा कोरोना सं क्रम णको खराब स्थितिबीच आएको हो ।
त्यहाँ वर्तमान समयमा अस्पतालहरु कोभिड–१९ का बिरामीहरुबाट भरिएका छन् । प्रशासनिक ब्यवस्था महामारी संग लड्न खोज्दैछ । प्रशासन तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानहरुमा पुर्याउन धेरै कठिनाईको सामना गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म करिब चार लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ विस्थापनको कारण कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना छ । कोभिड सुरक्षा उपायहरुको पालन गर्न गाह्रो भइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
त्यसकारण, शिविरहरुमा राखिएका मानिसहरुमा छिटो संक्रमण फैलने सम्भावना छ । प्रान्तमा कोरोना भाइरसको डेल्टा संस्करणबाट संक्रमित बिरामीहरुको संख्या बढ्दो छ ।
कम खोपकरण मानिसहरुमा संक्रमणको फैलावटको लागी एक प्रमुख कारण बन्ने देखिएको छ । त्यहाँ तूफान र यो भन्दा पहिलेको स्थितिबाट प्रभावितहरुको लागी अस्पतालहरुमा कुनै कोठा बाँकी छैन ।
त्यसकारण न्यू अर्लिन्सका अस्पतालहरु दबाबमा छन् । आँधीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित त्यस क्षेत्रमा पहिले नै कोरोनाका बिरामीहरु भरीएका छन् ।
न्यु अर्लिन्समा अहिले मौसमको स्थिति बिग्रने अनुमान गरिएको छ । मेयर ला टोया सेन्ट्रेलले मानिसहरुलाई राहत कार्यमा सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
No Comments on भरमणीको प्रस्तुती हेरेपछि पुर्वयुवराज पारस शाहले दिए यस्तो प्रतिकृया !
काठमाडौँ – ताप्लेजुङका भरतमणि पौडेलले कमेडी च्याम्पियनको गएको एपिसोडमा पूर्वयुवराज पारस शाहको क्यारिकेचर गरे । उनको प्रस्तुतीले निकै चर्चा बलुटेको छ ।जो कमेडी च्याम्पियनमा आउनुअघि यस क्षेत्रमा आफूलाई चिनाउन संघर्षरत थिए । युट्युवमा उनका केही भिडियो पहिल्यै हिट भइसकेका थिए । यद्यपि, कमेडी च्याम्पियनको मञ्च पाएपछि उनको पहिचान रातारात उचाइमा पुगेको छ ।
भरतमणिको फिजिकल अडिसन सामान्य थियो । तर, त्यसपछिका प्रस्तुतिहरुमा उनले आगो बाले । एपिसोड ६ मा उनले गरेको पुण्य गौतम र हिमेश पन्तको क्यारिकेचरले धुम मच्चाएको थियो । त्यहीँबाट उनी दर्शकको नोटिसमा पर्न थालेका हुन्।
उक्त प्रस्तुतिमा कमेडी च्याम्पियनका पूर्वविजेता हिमेशलाई व्यंग्य गर्दै भरतमणिले भनेका थिए, ‘कमेडी च्याम्पियनले खासमा पुरस्कार नै गलत राखेको हो । कार होइन, ट्याक्टर राख्नुपर्थ्यो, हिमेशले कम्तिमा खेत जोतेर जीविका चलाउँथे ।’१५ औं एपिसोडमा भरतमणिले आफ्नो बेस्ट दिए । त्यसमा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित विभिन्न नेताहरुको दुरुस्त क्यारिकेचर गरेका थिए । र, त्यसमा कन्टेन्ट पनि उत्तिकै बलियो थियो ।
भरतमणिले गरेको पारसको क्यारिकेचरका बारेमा त धेरै चर्चा भइसकेको छ । यसमा उनले पारसको आवाज मात्र नभएर हाउभाउ पनि दुरुस्त उतारेका छन् । उनले पारसका हुलियामा गरेको डान्स स्टेप टिकटकमा भाइरल भएको छ।उनको प्रस्तुती पारसले पनि हेरेका छन् । क्यारिकेचर हेरेपछि छक्क परेको श्रोतको भनाई छ । उनले भरमणीलाई धन्यवाद दिएका छन् । पारसले उनलाई फोन गरेर धन्यवाद दिएका हुन् ।
साबधान ! दुई लाख ३६ हजार व्यक्तिको मृ त्यु हुनसक्ने सङ्क्रमणको नयाँ लहर आउने भन्दै डब्लुएचओले दियो यस्तो चे ता व नी
No Comments on साबधान ! दुई लाख ३६ हजार व्यक्तिको मृ त्यु हुनसक्ने सङ्क्रमणको नयाँ लहर आउने भन्दै डब्लुएचओले दियो यस्तो चे ता व नी
विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लूएचओ० ले यूरोपमा कोभिड–१९ को नयाँ लहर आउने र यसबाट आगामी डिसेम्बरसम्ममा कम्तीमा दुई लाख ३६ हजार व्यक्तिको मृ त्यु हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । युरोपका खासगरी गरिब मुलुकमा कोभिड–१९ वि रू द्धको खोप दर कम रहेको र यसले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा प्रभाबकारी भूमिका निर्बाह गर्न नसक्ने डब्लुएचओले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
डब्लूएचओ युरोपका निर्देशक हान्स क्लजले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, “गत हप्ता यस क्षेत्रमा मृ त्युको सङ्ख्यामा ११ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । एउटा विश्वसनीय अध्ययन रिपोर्टले युरोपमा डिसेम्बर १ सम्ममा थप दुई लाख ३६ हजार मानिसको मृ त्यु हुनसक्ने देखाएको छ ।”
युरोपले अहिलेसम्म १३ लाख कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृ त्यु भएको पुष्टि गरिएको छ । यूरोपका ५३ सदस्य राष्ट्रमध्ये ३३ मुलुकले गत दुई हप्तामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण दर १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको जनाएका क्लजले बताउनुभयो ।